Wasaaradda Khaarajiga Ingiriiska oo Muwaadiniinteeda uga digtay u socdaalidda Somaliland iyo Somalia | Somaliland.Org
Wasaaradda Khaarajiga Ingiriiska oo Muwaadiniinteeda uga digtay u socdaalidda Somaliland iyo Somalia
June 25, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xafiiska Arimaha Dibadda iyo Ururka Barwaaqo-sooranka Ingiriiska (FCO), ayaa muwaadiniinta dalka Britain uga digay inay u socdaalaan Soomaaliya, Somaliland iyo Maamul-gobolleedka Puntland, waqti uu shalay dalka socdaal ku yimi safiirka England u fadhiya Addis-Ababa.
Xafiiska Arrimaha Dibadda iyo & Commonwealth-ka ayaa kula taliyay muwaadiniinta Ingiriiska ahi inaanay u socdaalin Soomaaliya oo ay ku jiraan Somaliland iyo Puntland. Sidoo kalena xafiiska FCO wuxuu kula taliyay muwaadiniinta Ingiriiska ah ee Soomaaliya ku sugani inay ka baxaan. Warbixintan ogaysiinta ah oo lagu faafiyay shabakadda Web-site-ka uu khaaska u leeyahay Xafiiska Arrimaha Dibadda iyo Ururka Barwaaqo-sooranka Ingiriisku waxay u dhignayd sidan:
“Waxaanu idinkala talinaynaa dhamaanba socdaallada Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland. Koonfurta iyo gobolada badhtamaha, waxa ka jira rabshado khatar ah oo socda, heerar khatar ah oo falal dembiyo ah iyo guud ahaanba amaan darro gudaha ah. Waxaanu kula talinaynaa cid kasta oo muwaadiniinta Ingiriiska ahi inay ka baxaan Soomaaliya.
Hawlaha kooxaha kacdoonada iyo dareemada siyaasadeed ayaa aad u kacsan. Waxaana gaar ahaan jiray dagaal culus oo ka soconayay gudaha iyo hareeraha Muqdisho ilaa bilawgii May 2009, kuwaasoo ay ku jiraan qaraxii is-miidaaminta ahaa ee 18 Juun lagu dilay wasiirkii amaanka iyo inka badan 30 qof oo isugu jiray masuuliyiin iyo shicib. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa isna ku dhawaaqay nidaamka xukunka degdega ah 22 Juun. Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa shaaca ka qaaday in xanuunka hargabka doofaarku uu are ugu kacay ilaa heer 6. Inkasta oo ay xaaladda Somaliland ka jirtaa ka degen tahay, hadana waxa weli jira khatar wayn oo lagu hayo danaha Ingiriiska. 29 October 2008 saddex qarax ayaa ka dhacay Hargeysa (Somaliland) iyo laba ka dhacay Boosaaso (Puntland). Labada dhinacba khasaarooyin ayaa laga soo sheegay.
Ma jiro wakiil u fadhiya Ingiriiska qayb kasta oo Soomaaliya ka tirsan. Balse, Somaliland waxa daboola Safaaradda Ingiriisku ku leeyahay Addis Ababa, halka qabaha kale ee Soomaaliya ay ka daboosho Komishanka Sare ee Ingiriisku ku leeyahay Nairobi. Awood uma lihin inaanu bixino taageerooyin la-taliyenimo gudaha Soomaaliya, isla markaana hadii ay xaaladdu sii xumaato ma awoodi doono inaanu caawimo idiin geysano. Hadii ka sokow taladan lagu siiyay, aad go’aansato inaad u socdaasho ama aad Soomaaliya sii joogto, waxaad sidaa kuugu jirta khatar aad adigu isu-horseedayso. Dadka reer galbeedka ah iyo dadka u shaqeeya ha’addaha reer galbeedka ayaa yoolka la saarayay waqtiyadii la soo dhaafay, khatartanina waa mid soconaysa. Waxaana ugu dambeeyay muwaadin Ingiriis ah iyo mid Isbaanish ah in lagu afduubay Boosaaso 26 November 2008. Mid Ingiriis ah iyo Kenyaan lagu afduubay koonfurta gobolka Juba 1 April 2008. Budhcadda ayaa iyana ah mashkiladda ugu wayn ee xeebaha Soomaaliya iyo xataa biyaha aadka uga fog ee caalamiga ah sida biyaha dalka Yemen.
Waxa jirta khatar wayn oo argagixisada ah Soomaaliya oo dhan. Weerarada ayaa noqon kara kuwo aan loo kala aabo yeelin, iyada oo ay ku jiraan goobaha lagu qaadayo meelaha ay ka hawlgalaan khubarada shisheeyaha ah iyo ajaanibku tagaan. Hadii aad ka talaabsanayso taladan oo aad u socdaalayso Soomaaliya, waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad ku tagto socdaal sharraxan, siina hubisid dawooyin caafimaadkaaga la xidhiidha ka hor inta aanad gelin socdaalkaas.”
Socdaalka Safiirka Addis-Ababa ee Ingiriiska:
Qoraalkan digniinta ah ayaa ku soo beegmay waqti uu dalka socdaal ku yimi Safiirka Dawladda Ingiriiska u fadhiya Magaalada Addis-Ababa Mr. Normmal Link, isl amarkaana kulan la yeeshay Madaxweyne Rayaale. Waxaana wararku sheegayaan in Safiirku Rayaale u gudbiyay dhambaal uu ka siday Wasiirka Arrimaha dibedda Ingiriiska Mr. David Milliband. Sidoo kalena wuxuu la kulmay Axsaabta Mucaaradka ah, kuwaas oo ay ka wada hadleen arrimo khuseeya Doorashada Madaxtooyada.
Inkasta oo aanay Madaxtooyadu Saxaafadda madaxa bannaan wax war ah ka siinin kulanka labada dhinac, haddana Afhayeenka Madaxtooyada oo u waramay Telefishanka Dawladda, ayaa sheegay in Madaxweyne Rayaale oo Xafiiskiisa shalay ku qaabilay Safiirka ay ka wada-hadleen arrimaha Doorashooyinka iyo xoojinta xidhiidhka labada dal, “Weftigani Ingiriiska ah ee Madaxweynaha Somaliland uu saaka (shalay) ku qaabilay, waxa hoggaaminayay safiirka Ingiriiska ee dalka Itoobiya, waxaanu ka mid yahay raga u ololeynaya in doorashooyinka Somaliland ay deeq-bixiyeyaashu ay sida ugu fiican uga qaybqaataan. Madaxweynaha iyo weftiga safiirku waxay isla qaadaa dhigeen arrimo faro badan oo ku saabsan waxyaabaha ay qabsatay Somaliland.” ayuu yidhi Siciid Caddaani. Waxaanu isaga oo hadalkiisa sii wata intaa ku daray oo uu yidhi, “Waxa kale oo ay ka wada hadleen abaaraha saameeyay gobolada badan oo dalka ah, waxaanu uga waramay socdaalkii uu dhawaan ku tagay Madaxweynuhu gobolo ka mid ah Somaliland oo kala ah gobolada Saaxil, Togdheer iyo Oodweyne, roob la’aanta iyo abaaraha ku habsaday shacbiga Somaliland. Iyada oo dhibaatadaasi jirto haddana wuxuu Madaxweynaha Somaliland uu weftiga Ingiriiska u sheegay inay diyaar u yihiin inay adkaystaan nabadgelyadooda isla markaana ay ku shaqaynayaan nidaam dimurqaadi ah.”